Wild yam (မျောက်ဥ) - Hello Sayarwon
Wild yam (မျောက်ဥ)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Wild yam (မျောက်ဥ)
Wild yam (မျောက်ဥ) ကဘာလဲ။
မျောက်ဥ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Wild yam ဟာ အပင်တမျိုးဖြစ်ပြီး မ ဟော်မုန်းအစားထိုး သဘာဝပစ္စည်းတမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟော်မုန်းတမျိုးဖြစ်တဲ့ estrogen အစားထိုးကုသခြင်း၊ အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်တဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတွေမှာ မိန်းမကိုယ်ခြောက်သွေ့ခြင်း၊သွေးဆုံးကိုင်ဝေဒနာကို ကုသခြင်း၊ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်း၊အရိုးပွခြင်းတွေကို ကုသဖို့အတွက် Wild yam ကို သုံးနိုင်သလို လိင်စိတ်အားကောင်းလာအောင် ဒါမှမဟုတ် ရင်သားဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။Wild yam ဟာ diverticulosis လို့ခေါ်တဲ့ အူလမ်းကြောင်းပြဿနာတမျိုး၊သည်းခြေအိတ်နာကျင်ခြင်း၊အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်းတို့ကို ကုသပေးနိုင်ပြီး အားအင်တွေလည်း တိုးပွားလာစေပါတယ်။ သွေးဆုံးကိုင်ဝေဒနာတွေ (ဥပမာ တကိုယ်လုံးဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်းဖြစ်တာ စသည်)ကို သက်သာစေဖို့အတွက် တချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ Wild yam ကို အရေပြားပေါ်လိမ်းလေ့ရှိကြပါတယ်။Wild yam ကို အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့အတွက် အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေထံ မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
wild yam ဟာ သူ့ရဲ့ အာနိသင်တွေကို ဘယ်လိုပြသလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မပြုလုပ်ရသေးပါဘူး။ အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ စတီးရွိုက်အမျိုးမျိုး (ဥပမာ estrogen)အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ diosgenin ဓါတ်တွေ wild yam မှာ ပါဝင်တယ်လို့ လေ့လာမှုတွေအရ သိရှိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခန္ဓါကိုယ်က wild yam ကို estrogen ဓါတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲမပေးနိုင်ပါဘူး။
မျောက်ဥ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
axid သို့မဟုတ် အခြားဆေးများ သို့မဟုတ် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိလျှင်။
မျောက်ဥ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကလေးတွေမှာ Wild yam ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကောင်းစွာ လေ့လာထားရခြင်းမရှိသေးတာကြောင့် ကလေးတွေမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေချိန် :
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Wild yam ဆေးကို သုံးစွဲခြင်းဟာ စိတ်ချရမှုရှိမရှိနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်ချရအောင် မသုံးဘဲနေတာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မျောက်ဥ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Wild yam ကို သောက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် အရေပြားပေါ်လိမ်းခြင်းဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပြီး ပမာဏအများအပြားအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အော့အန်တာမျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မျောက်ဥ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
wild yam ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်
မသုံးစွဲခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ဦးစွာ တိုင်ပင်ရပါမယ်။ဥပမာ
ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုခံယူထားခြင်း ဒါမှမဟုတ် ပဋိသန္ဓေတားဆေးများ : တိရ စ္ဆာန်တွေမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာချက်တွေအရ wild yam မှာပါဝင်တဲ့ diosgenin ဓါတ်ဟာ estradiol နဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။estradiol ဆိုတာဟာ ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ မ ဟော်မုန်းတမျိုးဖြစ်ပြီး ပဋိသန္ဓေတားဆေးအချို့နဲ့ ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုတွေမှာ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။
ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ရင်သားကင်ဆာ၊သားအိမ်ကင်ဆာ၊သားဥအိမ် ကင်ဆာ၊endometriosis လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်တစ်ရှူးနေရာလွဲမှားရောဂါ ဒါမှမဟုတ် သားအိမ်အလုံးဖြစ်ခြင်း။
ပရိုတင်း S ချို့တဲ့ခြင်း : wild yam ဟာ မဟော်မုန်း estrogen လိုပဲ ပြုမူတာမို့ သွေးခဲနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို ပိုများစေပါတယ်။ လူနာတယောက်ဟာ သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေဖြစ်တဲ့ wild yam, dong quai, red clover နဲ့ black cohosh တို့ပါဝင်တဲ့ ဆေးတမျိုးကို သုံးစွဲပြီး သုံးရက်လောက်ကြာတဲ့အခါ မျက်လုံးမှာရှိတဲ့ မြင်လွှာကို သွေးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ သွေးကြောမှာ သွေးခဲဖြစ်ပေါ်လာတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါလူနာမှာ ပရိုတင်း S ချို့တဲ့နေပြီး systemic lupus erythematosus (SLE) လို့ခေါ်တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတမျိုးရှိနေခဲ့ပါတယ်။
မျောက်ဥ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
မျောက်ဥ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
ဆေးတောင့် သို့မဟုတ် သောက်ဆေးပြားများ။
Wild-Yam. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 970-
Wild-Yam. http://umm.edu/health/medical/altmed/herb/wild-yam. Accessed
Wild-Yam. https://www.drugs.com/npp/wild-yam.html. Accessed December 14,
ဆေးဖက်ဝင်, ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင်, ကျန်းမာရေး